QISO CAJIIB AH: Ka Tusaalle Qaado Qisadii Malik Ibn Dinar |
Goobaha Ay Saamayso Awoodda Fekerka Maskaxda
Xanaanaynta Waalidka Iyo Daryeelkooda
Tuke Somalism — October 15, 2015
Qisadii Malik Ibn Dinar Magaaladu waa Medina, meeshuna waa Masaajidka Nabiga Naxariis iyo nabad galyo korkiisa ha ahaato, waa xalaqad diinta lagu barto oo ay fadhiyaan arday aad u fara badani. Ardaydu waxa ay sugayaan sheekhoodii. Sheekhu maanta waa uu soo habsaamay, ardayduna waxa ay ka walwalsan yihiin soo daahida sheekhooda. Waxoogaay markii ay sugayeen ayuu sheekhii yimid isaga oo ay ka muuqato haybadii iyo karaamadii culimada saalixiinta ah lagu yiqiinay. Meeshii loogu talagalay ayuu fadhiisatay, salaan ka dibna wuxuu bilaabay hadalkiisii. Wuxuu yidhi “walaalayaal in badan ayaan masaajidkan idiinku dhigayay qaybaha kala duwan ee culuumta Islaamka. Maantase waxa aan doonayaa in halkii aynu casharka ka qaadan jirnay aan idinla wadaago qayb ka mida nolosha sheekhiinan idin hor fadhiya. Waxaan rajaynayaa in ay cibro idiin noqoto.
Noloshaydii hore Waxaan ku noolaan jiray Ciraaq. Ma aanan ahayn qof toosan. Xumaan oo dhan ayaanan faraha kula jiray. Waxaan ahaa nin aan wax naxariis ahi qalbigiisa ku jirin. Dadkoo dhami way i necbaayeen. Khamriga ayaan cabi jiray. Diinta waan ka fogaa, Salaadna haba sheegin. Maalin maalmaha ka mida ayaan magaalada u soo dhaadhacay, sidii caadadaydu ahayd anigoo suuqa dhex wareegaya ayaa waxa aan sheeda ka arkay laba nin oo is jiid jiidanaya. Labada nin midkood waxa uu ahaa nin nicmo ka muuqato oo maalqabeen ah, halka ka kale ay ka muuqatay baahi iyo duruuf adagi. Kan miskiinka ahi jilbaha ayuu ku taagnaa waanu baryootamayay, wuxuu ku ooyayay ninka maalqabeenka ah, halka ka maalqabeenka ahi uu miskiinka ku qaylinayay. Waxa aan ku soo dhawaaday halkii ay labada nin isku haysteen si aan bal u ogaado sida ay wax u jiraan. Waxaan waydiiyay in ay bal iiga waramaan waxa ay isku haystaan. Ii soo ducee Waxa hadalkii bilaabay maalqabeenkii wuxa uu ii sheegay in ninkan miskiinka ah uu 7 dirham sanad ka hor amaahiyay laakiin ilaa iminka uu u soo gudi la yahay daynkaas. Wuxuu yidhi “ninkani muddo ayuu iga dhuumanayay laakiin maanta ayaan qabtay waxa aanan ka qaatay todobadadii dirham ee aan ku lahaa “. Miskiinkii ayaan eegay waxanan waydiiyay bal isna in uu dhiniicsa ii sheego sida ay wax u jiraan. Miskiinkii ma dafirin in daynkaas lagu leeyahay laakiin waxa uu ii sheegay in aanu haysan wax aduun ah oo uu ku gudo daynkaas lagu leeyahay, lacagtan yar ee uu ninkani xooga kaga qaadayna waxa uu yidhi waxa weeye 7 dirham oo uu doonayo in uu caano ugu soo iibiyo gabdho yar yar oo uu dhalay oo ay baahi hayso.
Halkaa marka ay sheekadii marayso ayaan ka codsaday ninkii maalqabeenka ahaa in uu miskiinka u soo celiyo lacgata uu ka qaaday uuna ka sugo daynkaas inta uu miskiinku wax ka helayo. Maalqabeenkii arinkaas ma cajabin waanu iga diiday . Waan xanaaqay, dhulka ayaanan ku tuuray maalqabeenkii. Xoogg ayaan gacantaydda jeebkiisa ku galiyay waxaanan ka soo saaray lacagtii uu xoogga uga qaaday miskiinka. Lacgtii ayaan miskiinkii gacanta ka galiyay waxaanan ku idhi “orod oo caruurtaada caanaha u raadso”. Miskiinkii lacagtii ayuu qaatay isaga oo ay farxad wayni wajigiisa ka muuqato, wuxuu bilaabay in uu ii mahadnaqo. Markuu sii dhaqaaqayay ayaan ku idhi “caawa marka ay caruurtaadu caanaha cabaan.ha ilaawina in aad ii soo duceeysaan.” Nin Khariban yaa gabadhiisa siin Maalintii xigtay ayaa qalbigayga waxa la galiyay in aan guursado. Laakiin yaa gabadh u guurinaya nin khariban sidayda oo kale. Waxa ii soo baxaday in aanu jirin qof gabadhiisa ii aroosayaa, sidaa daraadeed waxa aan tagay suuqii adoomaha lagu iibin jiray, gabadh Muslimad ah oo adoona ayaan ka soo iibsaday, gabadhii waan xoreeyay ka dibna iyadii ayaan guursaday. Gabadhii waxa uu Alle iiga dhigay mid khayr qabta. Waxa ay i baratay salaadii iyo wanaag oo dhan.
Mudo yar gudaheed ayay nolashaydii is badashay, waxaanan faraha kala baxay xumaantii aan ku dhex jiray oo dhan. Waxa uu Alle reerkaygii ku irsaaqay gabadh. Jacaylka aanu u qabno gabadhaasi waxa uu ahaa mid aan xad laahyn.. Habayn habaynada ka mida iyada oo ila ciyaaraysa ayaa gabadhii lagu soo booday. Dhabtayda ayay ku dhacday wax yar ka dibna tii Alle ayaa u timid oo waa ay dhimatay. Musiibadani waa ay igu cuslaatay. Muddo ayaa waxa habayn iyo maalinba maskaxdayda ku wareegayay sawirkii gabadhayda. Meel kasta oo aan aqalka ka eegoba waxa iiga muuqanaysay gabadhaydii Faadumo. Habayn habaynada ka midda ayuu arinkani iga gaadhay meel culus oo aanan qaadi Karin , waxa aana goostay in aan habaynkaas oo dhan khamri cabo ilaa aan ka dhimanayo. Sidii aan khamrigii u cabayay ayaan dhacay, waxa aanan ku riyooday riyo cajiib ah, riyaadaas oo badashay nolashaydii oo dhan. Aabo goormaad toobad keeni Waxa aan ku riyooday aniga oo dhintay, oo la i aasay, oo uu qiyaamihii kacay dadkii oo dhan qubuurihii laga soo saaray, qof kastana uu dhinac u cararyo. Waxa aan eegay dhabarkayga waxa aanan ku arkay mas wayn oo dab igu afuufaya. Waan ka cararay laakiin maskii igama hadhin. Waxaabad mooodaa in aniga la ii soo diray. Sidii aan u cararayay ayaa anigoo daalay waxa iga soo hor baxay buur wayn. Buurta waxa ka baxayay dariiqyo yar yar oo ay taagnaayen caruur yar yari.
Markii ay caruurtii i arkeen ayay mar kaliya dhawaaqeen oo ay yidheehdeen, Faadumooy! Faadumooy! Faadumooy kaalay eeg eeg aabahaa. Gabadhaydii markii ay aragtay ayay gacanta u taagatay maskii. Maskii markiiba waa uu istaagay waanu iga hadhay. Gabadhaydii way ii timid gacanta ayayna i qabatay iyadoo leh aabo : “miyaanay u dhawaanay qalbiyadii kuwii Alle rumeeyay in ay Alle u khushuucaan.” Halkaas marka ay marayso ayaan ka soo booday riyadii. Waxa aan maqalay eedaankii salaada faajarka. Inta aan toobad keeenay oo aan maydhay ayaan tagay Masaajidka. Masaajidka aan tagay Iimam Shaafici ayaa tujinayay. Salaadii iimaamku waxa uu nagu tujiyay aayadii ay gabadhaydu akhrinaysay markii aan riyoonayay.
Waan khushuucay waxaanan hoosta iskaga idhi adaa laguu jeedaa Maalikoow. Salaadii markii laga baxay ayuu Imaam Shaafici wuxu bilaabay in uu fasiro ayadahaas uu akhriyay. Markii aan ka soo noqday Masaajidkii ee aan reerkaygii u soo noqday ayaa waxa aan ku idhi xaaskaygii “Alaabta inoo xidhxidh waxa aynu u guuraynaa magaalada Madina. Waxa aan bilaabay in aad diinta barto ka dibna sidaas baanan ku noqday Sheekhan maanta idin hor fadhiya.”
Next post Murtida Jimcaha "Abwaan Qamaan Bulxan"
Previous post Naxariis La’aanta Al-shabaab!
Waa Maxay Dhukaanku?